Qoriga Heerkulka Hore, KN95, Falanqeeyaha Meridian - Teknolojiyada Caafimaadka ee Cadeymaha ku saleysan Hebei
Caafimaadka Aasaasiga ah & Caafimaadka Caqliga leh horseed bixiyaha
Hebei tiknoolajiyad caafimaad oo ku saleysan caddaynta Hebei, LTD., Oo la aasaasay 2004, waa shirkad tiknoolajiyad sare oo heer qaran ah, shirkad heer qaran ah oo heer teknolojiyad heer sare ah iyo mid dhexdhexaad ah. Shiinaha, soo saaraha qalabka ilaalinta caafimaadka.
Shirkaddu waxay leedahay cilmi baaris madax-bannaan oo wanaagsan iyo horumarin, wax soo saar iyo nidaam iib.
Maaskaro Qalliin 1. Fasalka qalliinka caafimaadka st ...
Maaskaro Dhagxan Fuulay 1. Waa raaxo in la w ...
Maaskaro faashad 1. Waa raaxo in la xidho ...
KN95 1. Qaab dhismeed qurux badan iyo mu ...
Qoriga heerkulka hore ee X5
Foodda Heerkulka Gun X5 wax soo saarka i ...
Heerkulbeegga X6 ee loogu talagalay Dadka Waaweyn, Dijital ...
X6 Grey Surezen heerkulbeegga infrared infrared waa po ...
X6 Toosan 1. Saddex qaab, iftiinka iftiinka gadaal ...
Waxsoosaarka shirkadda in ka badan 3 milyan heerkulbeegga foodda, in ka badan 100 milyan maaskaro caafimaad shirkadaha, iskuulada iyo qaybaha kale, waxay bixisaa nabadgelyo lagama maarmaan u ah inay dib u bilaabaan shaqada iyo fasalada.
Horumarinta shirkadda iyo soo saarista mashiinka caafimaadka xuduudaha badan, falanqeeyaha meridian daawo dhaqameedka Shiinaha
Caafimaadka cadeymaha ku saleysan Hebei wuxuu si firfircoon uga qeyb qaatay safka hore ee kahortaga iyo xakameynta cudurada faafa.
Qalabka Adeegga Caafimaadka ee Smart
Ku tiirsanaanta hay'adaha aasaasiga ah ee cawska iyo xogta weyn ee caafimaadka internetka, Ku dadaal inaad dhisatid "isbitaal, takhtar, qoys, shaqsi", "Dadka, nolosha" oo ah mid ka mid ah goobaha adeegga caafimaad ee caqli-gal ah.
Xafiiska Beijing wuxuu kormeerayaa Howlgalka Caalamiga ee Boostada iyo ...
Dhawaan, Agaasime Ku-xigeenka Maamulka Boostada ee Beijing wuxuu hoggaamiyay koox u socotay Xarunta Hawada ee Hawada Hawada si ay u baaraan ...
Wararkii Ugu Dambeeyay ee Cudurka Aafada Adduunka
21-kii, waxaa jiray in ka badan 180,000 oo cusub oo adduunka lagu soo kordhiyay, maalintii ugu badneyd tan iyo markii uu dillaacay. Maalintii 22aad ...
Horaa loo yidhi, Saaxiib laab laabta ahi wuxuu keenaa dhul fog oo dhow
Tikniyoolajiyadda caafimaadka ee ku saleysan caddaynta Hebei waxay ugu deeqday dhammaan noocyada ka hortagga cudurrada degdegga ah ee looga baahan yahay Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Kazakhstan iyo dalal kale intii lagu jiray faafitaanka sare ee cudurka.
Ilaalinta caafimaadka aadanaha waa masuuliyadeena ugu sareysa.